Mareykanka oo joojiyay saldhigii uu u adeegsan jiray diyaaradaha Drones ee ku yaalay Itoobiya – STAR FM SOMALIA
Saldhigan oo ku yaal magaalada la yiraahdo Arab Minch ayaa waxaa uu Mareykanka u adeegsanayay howl galada ka dhanka ah Al-Shabaab iyo Al-Qaacida ee bariga Afrika.
Afhayeen u hadlay Safaaradda Mareykanka ee Itoobiya oo lagu magacaabo David Kennedy ayaa sheegay in labada dal ay isku raaceen in joogitaanka Mareykanka ee saldhigaas aan xilligan loo baahneyn, sidaas darteed uu ka guuray.
Saldhigan ayaa Mareykanka istcimaalayay tan iyo sanadkii 2011, waxaana sanadkii 2012 lagu sameyay dib u habeyn, iyadoo haatan lagu wareejiyay Ciidamada Itoobiya.
Mareykanka ayaa saldhig milateri oo weyn ku leh dalka Jabuuti oo deris la ah Soomaaliya, halkaasoo inta badan la sheego in diyaaradaha Drones ay ka soo duulaan.
Hadalkan ka soo yeeray dowladda Mareykanka ee ku aadan saldhigii ay adeegsan jireen Diyaaradaha Drones ee ku yaall Itoobiya ayaa ku soo beegmaya, iyadoo ay soo baxayaan warar sheegaya in Mareykanka uu haatan saldhig qarsoodi ku leeyahay Soomaaliya, kaasoo ay ka duulaan diyaaradaha Drones.